Global Voices teny Malagasy » Hongria: Ice-T sy ny lalàna Hongroa vaovao mifehy ny Media · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Janoary 2011 6:44 GMT 1	 · Mpanoratra Marietta Le Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mozika, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Ao anatina tontolo iray somary mafampàna ihany noho ilay lalàna Hongroa vaovao mifehy ny media , izay nanomboka nanankery ny 1 Janoary 2011, dia nanomboka nanadihady ny Tilos  (HUN), fampielezam-peo iray tsy mitodika amin'ny fitadiavana tombontsoa ara-barotra ny National Media and Infocommunications Authority  (Manampahefana miandrakitra ny Fampahalalam-baovao sy ny Fifandraisana).
Hatramin'ny nametrahan'ny manampahefana ‘tsindrim-peo manokana ho fiarovana ny tombontsoan'ny mpanjifa sy ny mpampiasa’, dia andraisany fepetra ihany koa ny amin'ireo tanora mihaino, izay no zava-nitranga rehefa nilaza  tamin'ilay fampielezampeo (HUN) Radio Tilos ry zareo fa hisy fanadihadiana hatao taorian'ny fanaraha-maso ny fandaharana nalefan'ilay fampielezam-peo. Ny fanarahamaso no nahita fa nandefa ny hiran'ilay mpiangaly gadona rap Ice-T  nitondra ny lohateny hoe It's On ilay fampielezam-peo tamin'ny 2 Sept 2010 tamin'ny 5:53 hariva .
Ice-T, izay mitoraka tweet ao ambadiky ny solon'anarana hoe @FINALLEVEL , dia nahalala tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra Tumblr  nalefa tweet fa hoe “noraràna” ny mozikany any Hongria. Toy izao ny fanehoan-keviny:
Na dia tsy mbola nisy toa azy aza ny vokatr'ilay fanarahamaso, ny National Media and Infocommunications Authority dia tsy maintsy hiatrika vava-ady maro noho io lalàna vaovao mifehy ny media io, izay naharaisana fanakianana iraisam-pirenena  rahateo.
Nomen'ny Tilos Rádió anarana hoe “Ice-T-gate ” ilay tranga sady nanangonany ireo fanehoankevitra naterak'ilay vaovao momba ny fanadihadiana. Maro ireo lahatsoratra tanaty bilaogy no nampibaribary fa ilay tononkira izay naraikitra tamin'ny teny Anglisy sy ny dikanteny amin'ny teny Hongroa eo amin'ilay taratasy avy amin'ny manampahefana dia feno diso fandika. Hongroa iray mpitoraka bilaogy izay nandefa ny dikan'ilay hira rap no nilaza  (HUN) fa ny Manampahefana dia nampiasa fandikàna izay efa nisy diso sahady tamin'ilay tononkira.
Na teo aza ireo resabe nanomboka tany amin'ny faramparan'ny taona 2010 tany, efa nahazo valin-kafatra ho setrin'ny fanambaràna  (HUN) ofisialy nomeny tamin'ny fanadihadiana ny Tilos Rádió . Ilay taratasy vaovao avy amin'ny Manampahefana koa dia navoaka  (HUN) tanatina bilaogy iray, Comment:com, miresaka ny votoatin'ny media. Ao anatin'ny taratasin'izy ireo, ny Manampahefana dia manindry manokana fa “angamba ireo mafàna fo nefa mazàna tsy mitonona anarana mitolona ho amin'ny fahalalahan'ny aterineto dia afaka hahita ny antony maha-lavitra an'ny Lajos Kossuth  an'i Ice-T, ilay tena [Hongroa] mpiaro ny fahalalahan'ny fanaovana gazety.”
Sixx of Comment:com dia nanasongadina andàlana vitsy avy amin'ilay taratasy izay nilazan'ny Manampahefana fa: araka ilay lalàna antsoina hoe Pacifica Foundation , dia aorian'ny amin'ny 10 ora alina ihany no azo alefa ny hiran'i Ice-T. “Raha tsy manaraka izany izy ireo, ny manampahefana Amerikana misahana ny media – ny kaomisiona Federaly miandraikitra ny Fifandraisana – dia mety hanasazy azy ireo amina lamandy izay tsy maintsy ho ambony lavitra noho ny tetibola isan-taonan'ny Tilos Rádió.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/01/03/11666/
 ilay lalàna Hongroa vaovao mifehy ny media: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BK6KF20101221
 2 Sept 2010 tamin'ny 5:53 hariva: http://tilos.hu/archivum/listen.php?file=2010/09/02/tilosradio-20100902-1730.m3u
 lahatsoratra Tumblr: http://sati1984.tumblr.com/post/2525789905/hungarian-media-authority-punishes-radio-for-playing
 naharaisana fanakianana iraisam-pirenena: https://globalvoicesonline.org/2010/12/31/hungary-viktor-censorban/
 no nilaza: http://rapnyelv.freeblog.hu/archives/2011/01/01/fassbinder_pinakotekaja_avagy_a_hatosag_es_ice-t/